Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Ruushku wuxuu rabaa Las Vegas oo u gaar ah Sochi
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Sochi Casino iyo Dhismaha Dalxiiska ee aagga khamaarka Krasnaya Polyana, Sochi, Russia
Aagga khamaarka Krasnaya Polyana ee Ruushka ayaa lagu hagaajin doonaa si loola tartamo xarumaha madadaalada caalamiga ah ee ugu waaweyn.
Ruushka Krasnaya Polyana wuxuu u socdaalaa sidii uu ula qabsan lahaa moodeelka ganacsiga Las Vegas marka la gaaro 2026.
Soo -saareyaashu waxay qorsheynayaan inay dib -u -habayn ku sameeyaan goobta loo dalxiis tago si ay faa'iidadooda ugu weyn u xoojiyaan adeegyada madadaalada halkii ay ka ahaan lahaayeen khamaarka.
Aagga khamaarka Krasnaya Polyana waxaa hadda matalaya saddex xarumood oo khamaar.
Krasnaya Polyana waa xarun barafka iyo barafka lagu barto oo ku taal koonfurta magaalada Ruushka Sochi oo leh sumcadda ah inay tahay tan “ugu ixtiraamka badan” Ruushka. Waxay sidoo kale caan ku tahay aaga khamaarka ee la abuuray Ogosto 2016.
Aagga khamaarka Krasnaya Polyana waxaa hadda matalaya saddex xarumood oo khamaar: Sochi Casino, Hall mishiinka Afyare Bonus, iyo Boomerang Casino. Aagga khamaarka waxaa kaloo ku jira tiyaatar, Hotel Bonus, dhowr maqaayado, iyo aagga ciyaaraha iyo madadaalada ee Wow Arena.
Waqtigan xaadirka ah, kaabayaasha dalxiiska ee Krasnaya Polyana waa dib -u -horumarin iyo ballaarin si loogu waafajiyo qaab -ganacsiyeedka Las Vegas marka la gaaro 2026.
“Qorshayaasha istiraatiijiyadeed ayaa daboolaya casriyeynta tas -hiilaadka ku yaal goobta loo dalxiis tago. Shanta sano ee soo socota, waxaan ballaarin doonnaa oo aan la qabsan doonnaa kaabayaasha aagga khamaarka Krasnaya Polyana qaabka ganacsi ee madadaalada ee Las Vegas, ”Dmitry Anfinogenov, madaxa horumarinta mashruuca, ayaa yiri.
Soo -saareyaashu waxay qorsheynayaan inay ku bilaabaan ballaarinta Boomerang Casino ee hadda jira, sameynta hool mashiin oo cusub oo ay abaabulaan gelitaan lacag la’aan ah maqaayadda qaaliga ah ee Brunello. Furitaanka weyn ee makhaayad cusub oo ku taal hoyga Rosa Khutor ayaa sidoo kale ku jira ajendaha 2021-22.
Sidoo kale, hawsha dayactirka ee Hotel Bonus ayaa hadda socota, iyadoo qolal dheeraad ah lagu dari doono bilaha soo socda. Aagga isboortiga iyo madadaalada ee Wow Arena ayaa sidoo kale la dayactirayaa xilliga dayrta, halka tiyaatar cusubna mar hore laga furay dabaqa labaad ee Sochi Casino.
Soo -saareyaashu waxay qorsheynayaan inay dib -u -habayn ku sameeyaan goobta loo dalxiis tago si ay faa'iidadooda ugu weyn u xoojiyaan adeegyada madadaalada halkii ay ka ahaan lahaayeen khamaarka. Si kastaba ha ahaatee, waxay sheegaan in aagga khamaarka la hagaajin doono si loola tartamo xarumaha madadaalada ee ugu waaweyn caalamka.
Tan iyo markii la furay 2016, aagga khamaarka Krasnaya Polyana ee Sochi waxaa soo booqday in ka badan 2 milyan oo qof oo ka kala yimid 155 dal. 2018, Casino Sochi wuxuu ku guuleystay abaalmarinta nolosha & ganacsiga Moscow sidii mashruuca madadaalada raaxada ee ugu wanaagsan Ruushka.